Edgemesh: Ny ROI amin'ny Hafaingan'ny tranokala Ecommerce ho serivisy | Martech Zone
Edgemesh: Ny ROI amin'ny hafainganam-pandehan'ny tranokala Ecommerce ho serivisy
Alahady, Desambra 5, 2021 Alahady, Desambra 5, 2021 Jacob Loveless
Ao amin'ny tontolon'ny e-varotra mifaninana dia zavatra iray no azo antoka: zava-dehibe ny hafainganam-pandeha. fianarana rehefa fianarana dia manohy manaporofo fa misy tranonkala haingana kokoa mankany nitombo ny tahan'ny fiovam-po, mitondra fiara sanda avo lenta ary manatsara ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Saingy sarotra ny manolotra traikefa an-tranonkala haingana, ary mitaky fahalalana lalina momba ny famolavolana tranonkala sy fotodrafitrasa "sisiny" faharoa izay miantoka ny tranokalanao ho akaiky ny mpanjifanao araka izay azo atao. Ho an'ny tranokala e-varotra, mety ho sarotra indrindra ny fandefasana traikefa avo lenta — miaraka amin'ny sehatra maro sy ny fiankinan-doha amin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo mitondra ny fahasarotana mankany amin'ny 11.
Ny fidirana ao anatin'io banga io dia fantatra kely, ary antsoina hoe orinasa "Speed ​​as a Service" miafina Edgemesh. Niorina tamin'ny taona 2016, ny Edgemesh dia manome serivisy fanafainganana turnkey izay manome hery ny mpivarotra an-tserasera an-jatony izay manome ny sasany amin'ireo traikefa an-tserasera haingana indrindra amin'ny Internet. Amin'ity Martech manokana ity, dia mitsoraka lalina amin'ny atao hoe Edgemesh, ny fomba fiasa ary ny karazana fampivoarana ny fampisehoana hitan'ny mpanjifa amin'ny sehatra fanafainganana.
Inona no atao hoe Edgemesh?
Tamin'ny taona 2021, namoaka ny azy i Edgemesh Server Edgemesh vokatra—sehatra fanafainganana amin'ny serivisy feno izay manome toerana malalaka 30-70% haingana kokoa. Edgemesh Server, izay miasa amin'ny tambajotra fanaterana votoaty roa (Cloudflare sy Fastly), dia sehatra fampisehoana serivisy feno. Araka ny filazan'i Edgemesh, ny Server dia maka tranokala efa misy ary mamindra azy amin'ny sisin-tambajotra tsy misy dikany ary manampy fanatsarana maromaro. Bebe kokoa momba izany eto ambany.
Ny mpanjifa Edgemesh dia vahaolana haingana amin'ny navigateur, na amin'ny lafiny mpanjifa. Ny mpanjifa dia manampy ny mpanjifa Edgemesh amin'ny alàlan'ny fampidirana kitiho iray na amin'ny fampidirana andalana tokana amin'ny tranokala misy azy. Plugins dia misy amin'izao fotoana izao WordPress, Shopify ary Cloudflare. Ny dingana fametrahana dia mahitsy ary maharitra 5 minitra eo ho eo.
Avy eo, ny mpanjifa Edgemesh dia manampy endri-javatra roa: fanaraha-maso ny mpampiasa tena izy (mba hanehoana ny fahombiazan'ny tranokala mifototra amin'ny traikefan'ny mpanjifa tena izy) ary ny caching amin'ny lafiny mpanjifa. Edgemesh dia manampy caching amin'ny lafiny mpanjifa manan-tsaina amin'ny alàlan'ny rafitra Service Worker — maodely natao tany am-boalohany mba ahafahan'ny tranokala miasa ivelan'ny Internet. Izany dia manampy amin'ny fampitomboana ny votoaty azon'ny navigateur tazonina eo an-toerana, mampihena ny fangatahan'ny mpanjifa amin'ny lohamilina. Izany fotsiny dia manome haingana ny fitaovana, fa ny majika dia avy amin'ny lojika "pre-cache".
Miorina amin'ny fifandraisan'ny mpampiasa tena izy sy ny mari-pandrefesana zava-bita, manitatra am-pahakingana ny cache navigateur i Edgemesh mba hahazoana antoka fa misy fananana bebe kokoa voapetraka mialoha ho an'ny mpampiasa — amin'ny ankapobeny dia maminavina hoe aiza no halehan'ny mpanjifa manaraka ary manandrana mijanona ho dingana iray. Ny fiantraikan'ny zava-bita dia azo jerena ao amin'ny vavahadin-tserasera Edgemesh, miaraka amin'ireo mpampiasa "Accelerated" dia ireo izay nanompoan'ny cache an'ny mpanjifa 10% na mihoatra ny pejy, ary ireo mpampiasa "Tsy nafaingana" dia ireo izay tsy nahazo tombony firy. ny cache an'ny mpanjifa Edgemesh dia mamorona. Miorina amin'ny fanadihadiana momba ny tranga tena mpanjifa, ny Edgemesh Client dia manampy amin'ny fampitomboana ny hafainganam-pandehan'ny tranokala amin'ny 20-40%.
Fahombiazan'ny mpanjifa Edgemesh
Ny mpanjifa ihany koa dia maka sy manatanjaka ny angon-drakitra momba ny zava-bita. Ity angona ity dia angonina avy amin'ny tena mpampiasa ao amin'ny tranokalanao—izay antsoina hoe angona saha. Betsaka ny mpifaninana amin'ity sehatra ity, ao anatin'izany ny New Relic, App Dynamics ary Datadog — fa ny vavahadin-tserasera Edgemesh dia natao hanehoana ny angon-drakitra momba ny zava-bita amin'ny fomba efa nodinihina mialoha izay hitanay intuitive.
Ohatra, ny metrika fampisehoana tsirairay dia manana ambaratonga voafaritr'izay heverina ho haingana, antonony ary miadana (loko misy kaody ho an'ny fahatsorana) — ahafahan'ny olona rehetra mamantatra haingana ireo faritra mila fanatsarana. Ny metrika fampisehoana rehetra azo anaovana famakafakana dia alaina ary azo zaraina amin'ny fitaovana, rafitra fiasana, jeografia na isaky ny pejy mihitsy aza ny zava-bita. Ho fanampin'izay, ny vavahadin-tserasera dia mampiseho angon-drakitra momba ny fotoana amin'ny alàlan'ny API — ahafahanao mahita ny fiantraikan'ny sora-baventy sy ny rindranasa an'ny antoko fahatelo eo amin'ny zava-bitan'ny tranokalanao, miaraka amin'ny rohy haingana hanehoana fampiharana miadana ihany.
Edgemesh Server dia sehatra fanafainganana serivisy feno. Tsy toa an'i Edgemesh Client, ny vahaolana Server dia mitaky dingana iray amin'ny onboarding. Izany hoe, mora toy izany koa ny fametrahana — miaraka amin'ny mpanjifa manavao fotsiny ny rakitra DNS tokana mba hifindra amin'ny sehatra Edgemesh.
Edgemesh Server dia mipetraka eo ambonin'ny tamba-jotra fanaterana votoaty roa lehibe—Cloudflare sy Fastly. Miaraka amin'ny Server Edgemesh, ny mpitsidika dia nahatratra ny dikan-teny "tsindrin'ny serivisy" amin'ny tranokalanao, izay mampihena be ny fotoana hanaterana ny pejy. Ho fanampin'izay, ny Edgemesh Server mandeha ho azy sy mangarahara dia manome fahafahana maromaro amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny orinasa, ao anatin'izany:
Fanamafisana ny sary amin'ny endrika taranaka manaraka anisan'izany ny AVIF
Fanavaozana ny protocole fifandraisana amin'ny HTTP/3 rehefa misy
Mamindra votoaty mankany amin'ny niaviany (famoahana domaine)
Fanampiana torolalana mialoha mialoha sy mavitrika mialoha ny famoahana pejy
Manampy ny mpanjifa Edgemesh
Ho an'ny orinasa e-varotra, ny Edgemesh Server dia mamela azy ireo hijanona amin'ny sehatra misy azy (oh Shopify) nefa mahazo tombony amin'ny fampisehoana amin'ny tranokala tsy misy lohany amin'ny sisiny. Miaraka amin'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra ankehitriny, nizara ohatra vitsivitsy momba ny tombony azon'ny mpanjifany i Edgemesh tamin'ny Server Edgemesh:
Valin'ny Tontolo tena izy
Edgemesh dia manana fanadihadiana tranga maromaro hita ao amin'ny tranokalany, saingy nanome ohatra amin'ny antsipiriany momba ny tombony azo amin'ny fampisehoana sy ny fiantraikany amin'ny tahan'ny fiovam-po izy ireo. Miorina amin'ny angon-drakitra nomenay no azonay hamafisina—zava-dehibe ny hafainganam-pandeha!
Mangataha Demo Edgemesh
Jake Loveless dia nanana asa nandritra ny roapolo taona tamin'ny fampandehanana haingana ny teknolojia. Avy amin'ny rafitra ara-barotra faran'izay ambany ao amin'ny Wall Street ka hatramin'ny sehatra tranonkala midadasika ho an'ny Departemantan'ny Fiarovana ka hatramin'ny tambajotra mikraoba ho an'ny orinasam-pifandraisan-davitra - Jake dia nanampy tamin'ny fanosehana rindrambaiko ho amin'ny fetran'ny hafainganam-pandeha vaovao. Nihazakazaka i Jake androany Edgemesh, ilay orinasa maneran-tany manafaingana ny tranonkala izay niara-naorina tamin'ny mpiara-miombon'antoka roa tamin'ny 2016. Edgemesh dia manampy ireo orinasa eCommerce manerana ny indostria sy sehatra maro manolotra entana 20-50% haingana kokoa ho an'ireo mpampiasa manerana izao tontolo izao.